ဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ကိုဟောင်ကောင် "ဟု New ကုမ္ပဏီများ Ordinance 2014 ၏" ဥပဒေအောက်တွင်လာသည်။ တစ်ဦးက PLC တာဝန်ယူမှုအနေဖြင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် "အစုရှယ်ယာများကကန့်သတ်ထားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ" ဟုခေါ်နေတဲ့ဟောင်ကောင် PLC အလတ်စားကုမ္ပဏီများအဖို့သေးငယ်အဘို့အကုမ္ပဏီ၏အမြားဆုံးအသုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
• (န်ထမ်းဟောင်းန်ထမ်းများအပါအဝင်မဟုတ်) 50 မှရှယ်ယာရှင်များ၏နံပါတ်ကန့်သတ်ခြင်း,
•ကုမ္ပဏီ debentures သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရရှိရန်အများပြည်သူတို့ကမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်ထားပါသည်။
တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှုကြောင်းရှယ်ယာရှင်များကကျင်းပခဲ့သည့်ရှယ်ယာအပေါ်မရတဲ့ (ရှိပါက) ပမာဏကိုကန့်သတ်သည်။
တရုတ်ပြည်မကြီးပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနေစဉ်, ဟောင်ကောင်ကိုဗြိတိသျှအဖြစ်များသည့်ဥပဒေအောက်ပါအတိုင်း။ 99 နှစ်ပေါင်းဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်ယင်း၏ဘာသာစကား, ဥပဒေများနှင့်များစွာသောအကောက်ခွန်အင်္ဂလိပ်လိုက်နာပါ။ ၎င်း၏ခန့်မှန်းလူဦးရေ7သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်အနည်းငယ်မျှသာပြည်မတရုတ်အစိုးရဝင်ရောက်စွက်ဖက်နဲ့အခမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုစီးပွားရေးစနစ်ကလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
တစ်ဦးကဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကမ်းလှမ်း:
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များအတွက် PLC များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေမရှိကြပေ။ တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်ရှယ်ယာရှင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: တစ်ဦး PLC ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်နေစဉ်, ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များကိုခနျ့အပျဖို့ option ကိုလည်းမရှိ။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်နိမ့်ဆုံးတစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• အနိမ့် Authorized Capital ကိုအဘယ်သူမျှမ: တစ်ဦး PLC မနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ရှိပါသည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှု၏ရိုးရှင်းသောလွှဲပြောင်း: ဒါဟာအခြားမှလွှဲပြောင်းရန်ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ရိုးရှင်းပါသည်။ တတိယပါတီသစ်များရှယ်ယာရှယ်ယာသို့မဟုတ်ထုတ်ပေးရေးများ၏ရောင်းရငွေတစ်ဦးဆွေမျိုးရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
• အစဉ်အမြဲသက်တော်: အဆိုပါ PLC အများဆုံးဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်အစဉ်အမြဲဘဝရဲ့ရှိပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: အင်္ဂလိပ်ဟောင်ကောင်၏ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်ကုမ္ပဏီစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အစိုးရမှတ်ပုံတင်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တိုင်း PLC တစ်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်းတစ်ခုဆောင်းပါးများဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်း Ordinance အားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်, ပြီးတော့တစ်ဦးက Business မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိဦးမည်ဖြစ်သောဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီများ Registry ကိုအတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
၏ The One-ရပ်တန့်ကုမ္ပဏီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုပူးတွဲတစ်ပြိုင်နက်တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးစလုံးအေဂျင်စီများနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု register နိုင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီများ Registry ကိုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ 2011 အတွက်ပြည်တွင်းရေကြောင်းအခွန်ဦးစီးဌာနတို့ကဖြန့်ချိခဲ့သည်။
တစ်ဦးကဟောင်ကောင် PLC အခြားမည်သည့်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းပုံနဲ့တူတဲ့နာမည်တစ်ခုမသုံးရပါမည်။ အမည်များ Chinese သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ PLC ရဲ့အခွင့်အာဏာမရှိဘဲအစိုးရအလောင်းတွေသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့နှင့်စပ်လျဉ်း၎င်းတို့၏အမည်များအတွက်အချို့သောစကားလုံးများကိုသုံးပြီးထံမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
တိုင်း PLC ဒေသခံတစ်ဦးရုံးလိပ်စာရှိရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးပုံမှန်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပြည့်အဖြစ်သို့သော်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်မလိုအပ်ပါ။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်နိမ့်ဆုံးသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်နိုင်သည့်တစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရှယ်ယာရှင်များအတွက် PLC များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေမရှိကြပေ။ တာဝန်ယူမှုကိုတစ်ဦးရှယ်ယာရှင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကန့်သတ်ထားသည်။ ရှယ်ယာရှင်များကုမ္ပဏီအတွက်အေးဂျင့်များထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်။
ဂုဏ်သတ္တိများအပါအဝင်အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးစာချုပ်များနှင့်အကြွေးတွေခံရနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီပိုင်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအစဉ်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုဆိုနှင့်၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များနှင့် file ကိုတရားစွဲမှုသို့မဟုတ်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်တရားစွဲခံရမည်နှင့်အတူကျုံ့နိုင်ပါ။
အဆိုပါ PLC များအတွက်အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်သူအဖြစ်ခန့်အပ်ထားရပါမည်, သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်တရားဝင် entity မဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာနိုင်ပါတယ်။ သောညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ရှယ်ယာရှင်များကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မည်မဟုတ်ပါ။ ရှယ်ယာရှင်များဒါရိုက်တာတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ခန့်အပ်ခြင်းအပါအဝင်အချို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအပေါ်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်နိုင်သူတစ်ဦး PLC များအတွက်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးဟောင်ကောင်နေထိုင်ရပေမည်။ ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပါကဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရာသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ရုံးရှိသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ PLC တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးရှိပါတယ်ရှိလျှင်, သူသို့မဟုတ်သူမကိုလည်းကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးမဖြစ်နိုင်ပါ။
တစ်ဦး PLC မနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ရှိပါသည်။
ဝင်ငွေ၏တစ်ဦးတည်းသောအရင်းအမြစ်ဟောင်ကောင်ပြင်ပထုတ်ပေးလျှင်အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်ချမှတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်းကိုဟောင်ကောင်ရှိရင်းမြစ်ထားတဲ့ဝင်ငွေကနေဆင်းသက်လာအားလုံးအမြတ်အစွန်းများအတွက် 16.5% ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအခွန်ကုမ္ပဏီနှင့်မတစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်အခွန်ပြန်သည့်ပြည်တွင်းရေကြောင်းအခွန်ဦးစီးဌာန (IRD) နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။
ဟောင်ကောင်ရဲ့ပြည်သူ့ Registry ကိုတစ်ဦး PLC ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝအသေးစိတျမဆံ့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရှယ်ယာရှင်များ privacy ကိုများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခန့်အပ်နိုင်ပါ။
တိုင်းဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်ပေးနှစ်ပတ်လည်ပြန် file ရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီတွေဟာစာရင်းစစ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file ရမယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရိုးရှင်းသောဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file နိုင်အောင်သေးငယ်တဲ့ PLC ရဲ့တစ်ဦး "အစီရင်ခံကင်းလွတ်ခွင့်" အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီများအမြတ်အစွန်းလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်သဘောပေါက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု Chinese သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်မှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆင်ခြေမရှိဘဲလိုက်လျောဖို့ပျက်ကွက်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်အများဆုံးဟောင်ကောင် $ 100,000 မှာဖြစ်ပါတယ်
နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျ PLC အစည်းအဝေးများမလိုအပ်ပါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ပေါ်ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သူတို့ကမည်သည့်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက PLC တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များကို အသုံးပြု. ၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များအဘို့ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုနှင့် privacy, တစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ပိုင်ဆိုင်မှုရိုးရှင်းသောလွှဲပြောင်း, အစဉ်အမြဲတည်ရှိ, နှင့်အင်္ဂလိပ်: တစ်ဦးကဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကမ်းလှမ်း ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်။